एन्फा बैठक आज फेरी बस्दै , लिग र थ्री स्टारका विषयमा निर्णय होला ? | Hamro Khelkud
एन्फा बैठक आज फेरी बस्दै , लिग र थ्री स्टारका विषयमा निर्णय होला ?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – लिग फुटबलको मिति तय गर्न र रुस्लान थ्री स्टार क्लबलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा निर्णय लिन नसकेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को बैठक आज फेरी बस्दैछ । साउन ११ गते सुरु भएको बैठक थ्री स्टारलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा विवाद चर्केपछि स्थागित भएको थियो । साउन १२ लाई बैठक सुरु गर्ने बताइएपनि बैठक सुरु नहुँदै सुचना टास गरे बैठक स्थगित भएको थियो ।
एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ
त्यसता पुनः १४ दिनको पूर्व सुचना गर्ने वैधानिक व्यवस्था अनुसार आजको लागि एन्फाले बैठक डाकेको थियो । यसअघि बैंठक जहाँ स्थगित भएको त्यहिबाट प्रारम्भ हुने एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्द्रमान तुलाधरले बताएका थिए । एन्फा प्रवक्ता समेत रहेका तुलाधरले थ्री स्टारको विषय, लिगको मिति तय गर्ने लगायत सबै विषयमा निर्णय लिइने जनाएका छन् ।
गत बर्ष एन्फाको गल्तिका कारण छनोट भइसकेको थ्री स्टारले एएफसी कप खेल्न पाएन। त्यसको विरोधमा थ्री स्टारले दोषीमाथि कारवाहीसहित ६ करोड रुपैयाँ क्षेतिपूर्ति माग गरेको थियो। साथै थ्री स्टारले माग पुरा नभएसम्म एन्फाले आयोजना गर्ने कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग नलिने घोषणा गरेको थियो। त्यसै अनुसार थ्री स्टारले आफ्नै अध्यक्ष स्वर्गिय ललितकृष्ण श्रेष्ठको स्मृतिमा आयोजित यू १८ प्रतियोगितामा समेत भाग लिएन।
लिग सञ्चालन र थ्री स्टारलाई दिने भनिएको क्षेतिपूर्तिका विषयमा कार्यसमितिमा एकमत छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को समेत संलग्नतामा थ्री स्टारलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिन एन्फाका केही जिम्मेवार पदाधिकारीले सहमति गरेपनि त्यसलाई कार्यसमितिबाट पास गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने देखिएको छ । साउन ११ कोे बैठकका लागि एन्फाले महिला फुटबल, साफ यू १५ महिला फुटबल, उमेुर समूह, फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता र आयोजना, मिनी पिच र औषधि उपचार खर्चका विषयमा भने सहमति भइसकेको बताइएको छ ।
पदाधिकारीले नै गल्ती गर्नेलाई कुनै कारवाही नगरी एकतर्फी रुपमा क्षतिपूर्ति दिने मात्र सम्भव नहुने बताएपछि एन्फा बैठक स्थगित गर्न एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ बाध्य भएका थिए । साउन ११ गतेका लागि तय भएको एजेन्डामा पुरस्कारका विषय थपिएको सिइओ तुलाधरले जनाएका छन् ।
‘एन्फाले दिने पुरस्कार शरद चन्द शाह स्मृति, रुपक स्मृति र उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डको प्रस्ताव थपेका छौं’ उनले भने, ‘अन्य सबै पुरानै एजेन्डा हुन् ।’ अब बस्ने बैठकले सबै विषयमा निर्णय गरेरअघि बढ्ने तुलाधरले बताए । ‘अब सधै अलमल गरेर हुन्न’ उनले भने, ‘सबै एउटै विषयमा अल्झदा फुटबल गतिविधिनै नहुने खतरा बढ्दै छ । अब सबै विषय टुंगाएर विशेष साधारण सभामा जानु पर्ने अवस्था छ । ’
थ्री स्टारका विषयमा दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने चर्को अवाज समेत उठेको एन्फा बैठकले क्षतिपूर्तिको विषयमा टुंगो लगाउन नसक्ने सम्भावना पनि त्यतिनै छ । एन्फाका एक सदस्यले क्षतिपूर्तिको विषय साधारण सभा सम्म जान सक्ने सम्भावना रहेको हाम्रो खेलकुद डटकमलाई बताए ।